Ụbọchị My Pet » 5 Mere nri ụtụtụ mbụ AFỌ bụ amamiihe
emelitere ikpeazụ: Jan. 20 2021 | 2 min agụ
Ha na-ala nsogbu:
Ịnagide ụtụtụ pụtara na-atụ anya ka ndị "akpọrọ" nke ụbọchị nwere ike ịbụ ka di ntakiri ka o kwere omume na abụọ. O yighị ka ma nke ị ga-enwe gabiga ókè ihere ma ọ bụ onye maara na a bubbling, nri ụtụtụ-okowụk ụlọ oriri na ọṅụṅụ, dị ka nnọọ oge nke nri ụtụtụ bụ onye na-omenala kemgbe a ala isi omume. Otú ọ dị, n'adịghị dị nnọọ nzute maka kọfị, nri ụtụtụ ụbọchị ndabara na-enye ndị ọzọ wuru na-ohere maka ịmara quirks nke onye nke ọzọ. Site na-amụta ma ha na-amasị tomato kechoopu na àkwá ha otú ha na-eche banyere pancakes vs waffles, nri ụtụtụ ụbọchị nye mfe "na-aga na-" mkparịta ụka isiokwu mgbe ọ nke i nwere ike na-eche ihe na-ekwu.
E nweghị atụ anya nke ihe ọ bụla na-eme mgbe
Ma ọ bụ na-eche ma ọ bụrụ na a ga-enwe ọkpụkpọ òkù gị ụbọchị n'ụlọ ma ọ bụ a n'abalị si ịgagharị obodo ọnụ, nri abalị ụbọchị na-esokarị na-ejighị n'aka banyere otú / kpọmkwem mgbe abalị ga-akwụsị. Na nri ụtụtụ ụbọchị, n'akụkụ aka nke ọzọ, na njedebe oge pụrụ ịbụ pụtara mfe-eji atụmatụ. N'ezie, ọ pụrụ ọbụna ịbụ akụkụ nke ịtọlite ​​mbụ ụbọchị oge. Dị ka ọmụmaatụ, na-atụ aro a nri ụtụtụ ụbọchị 9am nwekwara ike-esonyere a nkịtị, "M a golf egwuregwu zubere maka 11;"Ụzọ a, ma ị bụ gị ụbọchị na-na-na ịma banyere otú ogologo ụbọchị ga-adịru. Ọzọkwa, na-ekwu banyere nke ọ bụla n'ime gị atụmatụ maka ike nke ụbọchị nwere ike ịbụ ihe ọzọ mfe "na-aga na-" isiokwu nke mkparịta ụka mgbe ị chomp ala na biscuits na ufufo anu.
Ha nwere ihe dị mfe na-ọnụ ọgụgụ-esi eyi akwa
Ịhọrọ ihe ekike maka a mbụ ụbọchị nwere ike ịbụ budata ọzọ akwara-wracking karịa ị na-ahọrọ ihe si gị wodrobu ọrụ ọnụ. Mbụ amụta bụ ịrụ ụka adịghị mkpa, ma figuring otú dressy ma ọ bụ ihe nkịtị ị kwesịrị ị na-abụ maka a na-akpa mbụ echiche bụ mgbe ndị na-akpata na-achọghị nchegbu maka ihe niile ọzọ aka. Na nri ụtụtụ, Otú ọ dị, ejiji elu ukwuu bụ fọrọ nke nta na-nke ajụjụ a. Ezie na igosi na sweats na a t-uwe elu bụ eleghị anya ọ bụghị ezi atụmatụ ma, nri ụtụtụ ụbọchị ka ndabara kpebiere a nọrọ jụụ, ukporo (ma adị) uwe koodu.
Ha nwere ike ịbụ dịtụ ọnụ
N'adịghị ka a nri abalị ụbọchị ebe ụgwọ nwere ike gbatịa si appetizers ka na ọṅụṅụ entrees ka desserts, nri ụtụtụ ụbọchị-fọrọ nke nta na-ekwe nkwa na-mara mma dịtụ ọnụ na ọtụtụ venues. Chọpụta, tinye-ons ka a ụgwọ nwere ike ịgụnye ịtụ kọfị ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ oroma ma ọ bụ chọrọ ịbanye a mkpụrụ salad n'akụkụ kama nke hash browns, ma n'ozuzu, nri ụtụtụ ụbọchị ndị mara mma mfe ikwu ihe price nke. Nke a bụ a abụọ ego maka ma gị na ụbọchị: Ị ga-aga dara na a nwere ike ọjọọ mbụ ụbọchị, na ọ / ọ ga na-eche ihe ọjọọ banyere gị okodu a hefty nchikota izute ya / ya.
Ha na-na ihe akaebe na-eme ...
Ọ Dị Mma, otú onye a nwere ike ịbụ a bit nke a gbatia, ma nnyocha na-egosi na-eri a ike nri ụtụtụ na mgbe oge jikọtara mma n'ozuzu ike na ihe mụbara ohere nke inwe ike iru arọ ọnwụ mgbaru ọsọ. N'ezie, otu n'ime ndị "kasị mma Atụmatụ" maka ibido na a ọma arọ ọnwụ njem na-eri nri ụtụtụ kwa ụbọchị. Nke a bụ n'ihi na-eri nri ụtụtụ bụghị nanị a na-atọ ụtọ ụzọ na-amalite gị ụbọchị, ma ọ bụ na-a stellar ụzọ agaghịkwa-amalite gị metabolism nke ya abalị na-ebu ọnụ mode. Nanị tinye, ịkpọ gị ụbọchị nri ụtụtụ bụ oké ụzọ na-ekwu, "Hey, M onye na-eche banyere m ike, na m nwere nnọọ ike na-eche banyere gị kwa!"